Binance Coin စျေး - အွန်လိုင်း BNB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Binance Coin (BNB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Binance Coin (BNB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Binance Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 249 855 191.00
volume_24h_usd: $66 707 300.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Binance Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Binance Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Binance CoinBNB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$21.73Binance CoinBNB သို့ ယူရိုEUR€18.35Binance CoinBNB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£16.6Binance CoinBNB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.19.75Binance CoinBNB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr193.23Binance CoinBNB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.136.65Binance CoinBNB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč478.59Binance CoinBNB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł80.68Binance CoinBNB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$28.83Binance CoinBNB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$30.3Binance CoinBNB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$477.94Binance CoinBNB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$168.42Binance CoinBNB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$117.82Binance CoinBNB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1626.57Binance CoinBNB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3668.82Binance CoinBNB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$29.79Binance CoinBNB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$33.22Binance CoinBNB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿676.27Binance CoinBNB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥151.03Binance CoinBNB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2316.11Binance CoinBNB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩25794Binance CoinBNB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦8392.66Binance CoinBNB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1582.87Binance CoinBNB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴594.05
Binance CoinBNB သို့ BitcoinBTC0.00188 Binance CoinBNB သို့ EthereumETH0.0566 Binance CoinBNB သို့ LitecoinLTC0.4 Binance CoinBNB သို့ DigitalCashDASH0.239 Binance CoinBNB သို့ MoneroXMR0.244 Binance CoinBNB သို့ NxtNXT1695.13 Binance CoinBNB သို့ Ethereum ClassicETC3.2 Binance CoinBNB သို့ DogecoinDOGE6271.62 Binance CoinBNB သို့ ZCashZEC0.264 Binance CoinBNB သို့ BitsharesBTS669.49 Binance CoinBNB သို့ DigiByteDGB695.35 Binance CoinBNB သို့ RippleXRP77.18 Binance CoinBNB သို့ BitcoinDarkBTCD0.749 Binance CoinBNB သို့ PeerCoinPPC72.1 Binance CoinBNB သို့ CraigsCoinCRAIG9902.43 Binance CoinBNB သို့ BitstakeXBS926.77 Binance CoinBNB သို့ PayCoinXPY379.4 Binance CoinBNB သို့ ProsperCoinPRC2726.86 Binance CoinBNB သို့ YbCoinYBC0.0117 Binance CoinBNB သို့ DarkKushDANK6974.58 Binance CoinBNB သို့ GiveCoinGIVE47071.71 Binance CoinBNB သို့ KoboCoinKOBO4951.33 Binance CoinBNB သို့ DarkTokenDT20.02 Binance CoinBNB သို့ CETUS CoinCETI62771.19
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 08:05:02 +0000.